The hacker Julian Assange jidere London | Apg29
The hacker Julian Assange jidere London
Justice oge rụchaa na-eme. The hacker na Wikilleaks nchoputa Julian Assange e jidere London site British uwe ojii kemgbe ahụ Ecuador ka napụrụ ya na ndọrọ ndọrọ ọchịchị mgbapu.
Julian Assange nwere ruo afọ asaa na ha bi na ndị Ecuadorian Embassy na London ebe ọ e nyere mgbapu ná mba 2012.
Na njide bụ a nro maka Assange nke ugbu a nwere ike ga-ekpe ndị United States. Ke United States, na ọ na-enyo enyo nke a mpụ nke na-ekesa nzuzo akwụkwọ.
Ebubo na ndina n'ike na Sweden
Julian Assange e boro ebubo na ndina n'ike na Sweden, ma nchoputa e mechiri na 2017.
Expressen dere, sị:
Ọ bụ na 2010 na Julian Assange e jidere absentia site a Swedish ikpe na enyo nke mmeko nwoke.
Ọ nọwo na-na Sweden na-enye okwu, gụnyere le nnukwu ụlọ na Stockholm na isiokwu nke "mbụ a na-egbu agha bụ eziokwu." Na njikọ na nleta Sweden kọrọ Assange nke mmeko nwoke na-enwe mmekọahụ wakpo nke ụmụ nwanyị abụọ, ihe na Express bụ nke mbụ na-ekpughe.
Assange gọnahụrụ ebubo ma jụrụ apụta maka ajụjụ, n'ihi na ọ tụrụ egwu na Sweden ga-enye ya ruo United States. Na December 2010 e jidere site British uwe ojii ma ikpe kpebiri ịhapụ ya na ịgbapụta.
Na June, mgbe afọ abụọ gasịrị, o ji ihe maka ndọrọ ndọrọ ọchịchị mgbapu na Ecuador si Embasii London - ebe ọ biri kemgbe.
Jesus esetịpụrụ ndị free
Ihe kacha mma ugbu a bụ WikiLeaks nchoputa Julian Assange ịgbaga Jesus. The ọrụ nnọchite anya obodo na-arụ ọrụ. Kama nke ahụ, ọ nọwo na-a n'ụlọ mkpọrọ n'ihi nchoputa, ma Jizọs na-esetịpụrụ ndị free!
Vecka 30, onsdag 24 juli 2019 kl. 10:26